ESI TINYE TIM SPEAKE 3 - TEAMSPEAK - 2019
Wụnye TeamSpeak Client
Ugboro abụọ na-ekpuchi ihe oyiyi nke ihe oyiyi na onye ọzọ na-ejighị nghọta na nhazi. A rụpụtara mmetụta a site na iji foto na-ese ugboro ugboro na otu eserese eserese n'enweghị nlọghachi.
Ngwa igwefoto nke oge a nwere ike iṅomi (imechi) okpukpu abụọ site n'iji nhazi software. Photoshop na-enyekwa anyị ohere ịmepụta foto ndị dị ka fantasy na-agwa anyị.
Ịgba okpukpu abụọ
Na nkuzi a, foto nwata nwanyị na-adaba na odida obodo. Enwere ike ịhụ na nhazi nwere ike ịhụ na ọkwa a.
Ihe mbụ maka ihe mmụta ahụ:
2. Ala na igwe mmiri.
Maka nhazi nke onyinyo ahụ, ọ dị mkpa ka anyị kewaa ihe nlereanya site na ndabere. The saịtị ahụ nwere ihe dị otú a mmụta, na-amụ ya, n'ihi na enweghị nkà ndị a ọ gaghị ekwe omume na-arụ ọrụ na Photoshop.
Otu esi egbutu ihe na Photoshop
Wepụ ndabere na ịtọba ebe ọdịda anyanwụ na akwụkwọ ahụ
Ya mere, mepee foto ahụ na ihe nlereanya na nchịkọta akụkọ ma hichaa ndabere.
1. Chọta foto na odida obodo ma dọba ya na ebe ọrụ Photoshop na ederede edetu.
2. Anyị kwesịrị iji nweta nlele ihuenyo naanị na ihe nlereanya ahụ. Iji mee nke a, jide igodo ahụ Alt ma pịa ókè n'etiti okpokoro. Onye na-akpọ cursor aghaghị ịgbanwe ọdịdị.
Ihe ndị a ga - agbanye:
Dịka ị na-ahụ, ugbu a, ọdịdị ala na-agbaso contours nke nlereanya. A na-akpọ nke a clipping mkpuchi.
Foto na ala, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ịkwaga, gbatị ma ọ bụ gbanwee.
3. Pịa igodo ọnụ CTRL + T ma mee ihe ndị dị mkpa.
Translucent chekwaa ya
Omume ndị ọzọ ga-achọ nlekọta.
1. Ịkwesịrị iji oyi akwa na-aga oyi akwa ma mepụta otu ya na igodo ụzọ mkpirisi CTRL + J.
2. Mgbe ahụ, gaa na ala ala ma dọrọ ya na elu nke palette ahụ.
3. A ghaghị gbanwee ọnọdụ ngwakọta nke n'elu oyi akwa "Ihuenyo".
Echiche dị iche iche
Iji mee ka ọdịiche dị (ngosipụta nke nkọwa) tinye ntụpọ mgbanwe "Ọkwa" ma dichaa oyi akwa n'elu.
Na windo ntọala ahụ, pịa bọtịnụ arịlịka ahụ.
Mgbe ahụ gawa na palette, pịa nri na oyi akwa "Ọkwa" ma họrọ ihe "Jikọọ na ndị gara aga".
Nwee ihe mejupụtara
A kwadoro ọrụ nhazi. Ugbu a, anyị ga-agbanwe ihe anyị mejupụtara.
1. Mbụ, mepụta ihe mkpuchi maka akwa n'elu na ihe nlereanya ahụ.
2. Mgbe ahụ were ahịhịa.
Ntụ ọka kwesịrị ịbụ "obi nro",
Nha kwesịrị ibu oke.
3. Azu a, mgbe ị na-ekpuchi, kpuchie ebe ndị dị na oyi akwa na ihe nlereanya, na-ekpughe oke ọhịa.
4. Gaa na oyi akwa na odida obodo ma mechie nkpuchi ọzọ. Site na otu ahịhịa anyị na-ehichapụ ókè n'etiti ihe oyiyi dị n'olu nwa agbọghọ ahụ, na-ewepu ụfe site na imi, anya, agba, n'ozuzu, site na ihu.
Ọ bụ oge ịtọ ntọala maka ihe mejupụtara.
1. Mepụta ohuru ohuru ma mee ya na ala nke palette.
2. Wee pịa na keyboard SHIFT + F5, si otú ahụ mepee windo ntọala. Na ndepụta ndalata, họrọ "Agba" ma pịa ya na cursor, nke were ụdị pipette, na ụda na-egbuke egbuke. Push Ok.
Anyị na-enweta ezigbo nzụlite.
Mgbanwe a na-agbanwe
Dika ị nwere ike ịhụ, n'elu elu nke onyinyo ahụ, e nwere oke mma. Ịhọrọ ngwá ọrụ "Ịkwaga",
gaa na oyi akwa na odida ala ma mee ya ntakịrị gaa n'aka ekpe, na-achọpụta na ọdịda ókèala ahụ apụla.
Ihe ndabere nke ngwugwu dị njikere, ọ ka na-agbanye ụda ma nye izu ezu.
1. Mepụta ukpụhọde mgbanwe Map nke gri,
mepee palette gradient ma pịa akara ngosi na akuku aka nri.
Na nchịkọta nhọrọ, họrọ set "Ntugharị foto",
Anyị na-ekwenye na nnọchi.
Maka toning, ahọrọ m gradient, nke gosipụtara na nseta ihuenyo. A na-akpọ ya "Sepia Gold".
2. Ọzọ, gaa na palette palette ma gbanwee ọnọdụ ngwakọta maka oyi akwa Map nke gri na "Mmiri nchara".
3. Na ala nke edozi isi nwere ike hụrụ ebe gbara ọchịchịrị. N'ime onyinyo a, ụfọdụ nkọwa banyere oke ọhịa ahụ furu efu. Mee ozigbo ntụzizi a na-akpọ "Ntugharị".
Anyị na-etinye aka na nkwụgharị ma na-ehulata ya n'aka ekpe na n'elu, na-achọ igosipụta nkọwa na mpaghara gbara ọchịchịrị.
Anyị ga-ahapụ mmetụta dị na ebe kwesịrị ekwesị, n'ihi ya, anyị anaghị aṅa ntị na nrụpụ ọrụ ọ bụla.
4. Mgbe ịchisịrị ntọala ahụ, gaa na palette, gbanye ihe mkpuchi ahụ na ogwe ma pịa igodo ọnụ CTRL + M. Ihe mkpuchi ahụ ga-agba ọchịchịrị, mmetụta nchacha ga-apụ n'anya.
5. Mgbe ahụ, were otu ahịhịa ahụ dị ka tupu ya, ma na-acha ọcha. Opacity na-ekpughe 25 - 30%.
Jiri nwayọọ na-agabiga ebe ndị gbara ọchịchịrị, na-egosi nkọwa.
6. Igwe nke ihe ndị dị otú ahụ gụnyere iji mpempe akwụkwọ, agbachighị agba. Belata ntanetị ihe oyiyi na nhazi oyi. "Mmiri / Saturation".
Bugharịa ihe mmịfe kwekọrọ ekwekọ na aka ekpe.
Nkọwa na agbakwunye ụda
Nanị ka ọ ga - eme ka ọ bụrụ na ị ga - eme ihe abụọ. Nke mbụ na-eme nkọ.
1. Gaa na klas kachasị elu ma mepụta mkpịsị aka na ụzọ mkpirisi keyboard. CTRL + ALT SHFT + E.
2. Gaa na menu "Filter - Sharpening - Sharpness Ekekọrịta".
Enweela uru uru na 20%radius 1.0 pixisohelium 0.
Nzọụkwụ nke abụọ na-agbakwunye mkpọtụ.
1. Mepụta ohuru ohuru ma kpokuo ebe ojuju na igodo. SHIFT + F5. Na listi ndida, họta ihe juru. "50% agba ntụ" ma pịa OK.
2. Gaa na menu "Filter - Noise - Add Noise".
Mkpụrụ na-ekpughe "Site na anya". Lee nseta ihuenyo.
3. A gbanwere usoro ngwakọta nke oyi akwa a "Gbanye"ma na "Mmiri nchara".
Ngwakọta na nkwadebe okpukpu abụọ. Ị nwere ike ịtọ ya ma bipụta ya.
Nhọrọ maka iji usoro a dị ukwuu, ọ dabere n'echiche na nkà gị. Enwere m olileanya na ị dị mma n'echiche gị, saịtị anyị ga-enye aka n'inweta nkà.